SARS Home > Types of Tax > Unemployment Insurance Fund > UIF isiZulu
ISIKHWAMA SOMSHWALENSE WOKUNGASEBENZI (I-UIF)
Isikhwama Somshwalense Wokungasebenzi (i-UIF) ulusizo lwesikhashana kubasebenzi lapho bephelelwa ngumsebenzi kumbe uma benqindekaukusebenza ngenxa yokuyobeletha, bethatha igunya lokukhulisa, kumbe ngenxa yokugula. Inika usizo lokubhekelela kulabo abebondliwe ngumsebenzi odlulile emhlabeni nowayefaka kulesi sikhwama.
Uhlelo lomshwalense wokungasebenzi eNingizimu Afrika lulawulwa yile mithetho elandelayo:
Umthetho Wemishwalense Wokungasebenzi, 2001 (the UI Act)
Umthetho Wezinkokhelo Zomishwalense Wokungasebenzi, 2002 (the UIC Act)
Le mithetho ihlinzeka ngemihlomulo evunyelwa ukutholwa ngabafakayo esikhwameni kanjalo nokuphoqelela nokuqoqwa kwezinkokhelo ze-UIF, ngokuhambisana, futhi waqala ukusebenza zingu-1 kuMbasa 2002.
Bonke abasebenzi, kanjalo nabaqashi babo, kufanele bakhokhe izinkokhelo kwi-UIF. Nakuba kunjalo, umsebenzi ushiwa ngaphandle ekukhokheleni i-UIF uma-
Eqashwe ngumqashi ngaphansi kwamahora angama-24 ngenyanga.
Ethola umholo ngaphansi kwesivumelwano sokuqasha njengokusingwa yisigaba18(2) Somthetho Wezokuthuthukiswa Kwamakhono, ka-1998 (Umthetho No. 97 ka-1998)
Eqashwe esikhundleni noma engumsebenzi kaHulumeni esigabeni sikazwelonke noma sesifundazwe.
Engene kwiRiphabliki ngenhloso yokusebenza ngaphansi kwesivumelwano, sokuqeqeshelwa umsebenzi noma sokufunda ngaphakathi kweRiphabliki. Uma kungukuthi lapho sesiphelile isivumelwano, umqashi ephoqwa ngumthetho noma yisivumelwano sokusebenza, sokuqeqesha noma sokufunda, kumbe ngesinye isivumelwano sokumthatha ukuba aphindise lowo muntu ekhaya, kumbe uma lowo munti edinga ukuhamba ashiye iRiphabliki.
UMongameli, uSekela-Mongameli, uNgoqngqoshe, uSekela-Ngqongqoshe, ilungu Lendlu Yesishayamthetho Kazwelonke. Oqokelwe Emkhandlwini Kazwelonke Wezifundazwe, ilungu loMkhandlu Kazwelonke kumbe ilungu lseishayamthetho sesifundazwe noma
Ilungu lomkhandlu kamasipala, umholi wendabuko, ilungu leNdlu Yobuholi Bendabuko kanye nelungu loMkhandlu WobaHoli Bendabuko.
Zinyathelo zini okumele ngizithathe?
Umqashi obhalisele Intela Yabasebenzi udinga futhi ukuba abhalisele ukukhokha izinkokhelo ze-UIF.
Laba baqashi abalandelayo kufanele babhalise ehhovisi likaKhomishana Womishwalenze Wokungasebenzi ukuze bakhokhele i-UIF, umqashi -:
Ongadingi ukuba abhalisele Intela Yabasebenzi kwa-SARS
Ongakazibhalisi ngokuzivumela kwa-SARS
Okhokha noma ofanelekile ukuba akhokhe umhlolo kumsebenzi kufanele akhokhe nyanga zonke Esikhwameni se-UI
Isamba sezinkokhelo esikhokhwa ngumsebenzi, kufanele sibe ngu-1% womholo awukhokhelwa ngumqashi.
Umqashi kufanele akhokhe isamba esingu-2% (u-1% ukhokhwa ngumsebenzi no-1% okhokhwa ngumqashi) ngaleso sikhathi esinqunyiwe.
Qaphela : Kusukela ngo-1 kuMfumfu 2012, ingeniso eliphakeme ngu-R14 872 ngenyanga kumbe R178 464 ngonyaka. Kubasebenzi abahola ngaphezu kwalesi samba, izinkokhelo zibalwa kusetshenziswa isamba esiphezulu kuzo zonke. Ngalokhu kutholakale isamba esiphezulu esingabanjwa, kubasebenzi abahola ngaphezulu kuka- R14 872 ngenyanga kuba ngu-R148.72 ngenyanga.
Imali eyongeziwe mayingahlanganiswa nomholo kumbe nemali etheliswa ngokwe-UIF.
Imali ethathiwe noma ebanjiwe kufanele ikhokhwe nyanga zonke kwa-SARS ngokugcwalisa Isidaluli Sabaqashi Sanyanga Zonke (i-EMP201). Le EMP201 iyisidaluli lapho umqasho edalula isamba semali kanye nezabelo ze-PAYE, ze-SDL, ze-UIF kanye noma kumbe Imihlomulo Yentela Yabasebenzi (i-ETI), uma ikhona.
INombolonkomba Yokukhokha (I-PRN) ekhethekile izobe isifakiwe kwi-EMP201, futhi izosetshenziselwa ukuxhumaninsa ukukhokha kanye nesidaluli sokukhokha i-EMP201 esifanele.
Kufanele ikhokhwe kuphi futhi kanjani?
Kufanele ikhokhwe ezinsukwini eziyisikhombisa ngemva kokuphela kwenyanga ethathwe ngayo. Uma usuku lokugcina lokukhokha lungeholide kumbe impelassonto, leyo nkokhelo kumele ikhokhwe ngosuku lokugcina lokuhweba andukuba kube liholide noma impelasonto.
Yilezi zindlela zokukhokha ezikhona:
Egatsheni lesinye sezikhungo zasebhange ezifanele. Ukukhokha ngesheke kungedlule ku-R50 000. Lo mkhawulo usebenza noma ngabe kukhokhelwa izikhathi ezingaki zesikathi sentela, kumbe umakukhokhwa ngamasheke amaningi
Egatsheni elithile lakwa-SARS, ukukhokha ngesheke kungedlule ku-R50 000. Lo mkhawulo usebenza noma ngabe kukhokhelwa izikhathi ezingaki zesikathi sentela, kumbe umakukhokhwa ngamasheke amaningi.
Isahluko 17 soMthetho Wokusingathwa Kwentela, 2011 ubhekene namacala angaphansi koMthetho Wentela ophinde usebenze futhi kuMthetho we-UIC.
Kusuke sekuyicala uma umuntu :
Ukuletha imbuyiselo noma ushicilelo kwa-SARS kumbe
Ukunika ushicilelo kumuntu okudingeka amnike.
Ehluleka kumbe engakhathaleli:
Ukubhalisa kumbe azise u-SARS ngezinguquko zemininingwane ebhalisiwe kumbe
Ukugcina amarekhodi njengokuyisidingo.
Eletha isitifiketi esingamanga. kumbe
Enqaba noma engakhathaleli ukuthatha isifungo noma ukuqinisekisa ukudalula.
Umuntu olahlwe ngelinye lalama cala kuzofanele akhokhe inhlawulo noma adonse ejele isikhathi esingevile eminyakeni emibili.
Vakashela igatsha lakwa-SARS eliseduze nawe
Ungahambela futhi izithangami zethu zokwabelana ngolwazi noma uvakashele Umahambanendlwane waka-SARS.
Last Updated: 28/06/2016 4:46 PM ​